Etu esi biputere foto panoramic na Instagram na Panoragram | Akụkọ akụrụngwa
Rafa Rodríguez Ballesteros | | General, Nkuzi
Chọpụta na ị hụla ụfọdụ Instagram posts nke elongated foto na-enweghị he enweghị nkewa. Foto ị nwere ike ịhụ zuru ezu ịpịgharị n’aka ekpe gaa n’aka nri. Ihe enwere ike iji akụrụngwa bipụta ọtụtụ foto yana nke ahụ nwere ike inye aka na akaụntụ gị. Panoragram bụ ngwa kacha adabara maka ya.
Taa ka anyị kọwaa nzọụkwụ site na nzọụkwụ kedu ka ị ga - esi tinye foto panoramic na Instagram gị nakwa na ha dị oke mma. Ekele dịrị ngwa etinyere naanị iji nwetakwu nke nhọrọ iji bipụta ọtụtụ foto n'otu post. Cos anyị na-agwa ihe niile gbasara otu esi eji Panoragram.
1 Panoragram na-enyere anyị aka na foto panoramic na Instagram
2 Jiri Panoragram site na nkwụsị
2.1 Họrọ eserese
2.2 Wepu logo si App
2.3 Biputere na Instagram
2.4 Nke a bụ mbipụta anyị
3 Panoragram, onyinye dị mma na akaụntụ Instagram gị
Panoragram na-enyere anyị aka na foto panoramic na Instagram
Ọ bụrụ na ịnụbeghị ngwa a, taa anyị ga-agwa gị ihe niile gbasara ya. Ndi ọtụtụ Ngwa eji aka ya raara onwe ya nye iji mejuputa ngwa ọrụ Instagram. Otu n'ime ihe ịga nke ọma, ma ka dịkwa, bụ "Zigharịa" nke anyi nwere ike iji "zipu" mbiputa nke aka ozo na nke anyi.
N'ihi mmepe ngwanrọ, ngwa ndị dị na mpụga nwere ike gbasaa ohere ndị ngwa ahụ kacha mma nye ndị hụrụ foto. Ọtụtụ mmadụ na-"arụ ọrụ" raara onwe ha nye Instagram site na nkwado ma ọ bụ iji kpọsaa. Maka nke a ha na-achọ mgbe niile ụzọ mbụ iji pụọ na akaụntụ ndị ọzọ ma mee posts dị iche iche.
E wezụga ogo nke foto ma ọ bụ ihe isi ike nke gbaa, ọ na-atọ ụtọ ịnweta akwụkwọ ndị na-adịchaghị adị. Anyị ahụla ngwa ndị mepụtara, site na ịkekọrịta otu foto n'ime ọtụtụ ntanetị ma mee ọtụtụ mbipụta, foto buru ibu nke enwere ike ịhụ na profaịlụ dị ka mosaic. Panoragram chọrọ naanị otu post ị ga-ahụ na nsonaazụ ya dị oke mma.
Jiri Panoragram site na nkwụsị
Ihe mbụ anyị ga - eme bụ budata ngwa. Ma nkọwa dị mkpa bụ na anyị na-ekwu maka ya ngwa nke bụ n'efu. O nweghikwa mgbasa ozi "Iwu", ọ bụ ezie na ọ bụrụ na anyị chọrọ mbipụta ikpeazụ anyị ịghara inwe akara mmiri site na App n'onwe ya, anyị ga-elele vidiyo vidiyo nke 30 nke abụọ.
Ozugbo anyị banyere ngwa ahụ, Ha ga-aputa na akpaghị aka ịhọrọ foto niile panoramic anyị nwere n’agha anyị nke foto. Ọ bụrụ na foto ahụ anyị chọrọ ibipụta na-enweghị mbelata na-eji ọtụtụ mbipụta apụtaghị, ọ bụ n'ihi na nha ya anaghị adabara na foto panoramic. Maka nke a, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịkpụcha ya site na elu na n'okpuru (nrịgharị) ka o wee nwee ụdị elongated.
Anyị na-ahọrọ ihe oyiyi ahụ na anyị chọrọ ibipụta n'etiti nhọrọ dị n'etiti nke anyị. Ihuenyo nke ngwa ahụ na-egosi anyị dị ka nke a.
Ozugbo ahọpụtara ihe oyiyi ahụ, na ntuziaka ịgbaso ka akwụkwọ anyị wee pụta otu ịchọrọ. Mgbe ịhọrọ foto achọrọ, ngwa ahụ n'onwe ya bụ ọrụ maka ikewa ya na abụọ ma ọ bụ karịa akụkụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, na-adabere nha. Ya mere anyị ga-ahọrọ site na ịpị ọtụtụ mbipụta ma họrọ akụkụ foto ndị e kere eke n'usoro ziri ezi.
Wepu logo si App
Mgbe ngwa ahụ gosi anyị preview nke otu anyị ga-esi hụ ihe oyiyi panoramic na ngwa ahụ, nke a Ọ nwere obere akara mmiri etinyere na aha Panoragram App. Dị ka anyị kwuru na mbido, Panoragram enweghị mgbasa ozi. Ma Ọ bụrụ na anyị chọrọ iwepu akara ngosi na App, anyị nwere ike ịme ya site na ịlele vidiyo mgbasa ozi nke 30. Ọ bụrụ n'ịchọghị ka onyogho gị buru akara, ọ dị anyị ka ọnụ ahịa ezi uche dị na ya. Ngwa ndị ọzọ na-eme nke a ma ọ bụrụ na anyị ebudata nsụgharị akwụ ụgwọ.
Ozugbo anyị pịa bọtịnụ ahụ "Wepụ logo" Ihuenyo ga-apụta ebe nhọrọ ahụ gosipụtara "lelee ugbu a". A ga-akpọ obere vidiyo mgbasa ozi, nke metụtara ngwa ndị ọzọ metụtara foto, yana elekere na a 30 abụọ ngụda. Ozugbo ha gafere anyị ga-ahụ otú foto anyị si ese n'enweghị akara ngosi site Panoragram.
Biputere na Instagram
Oge erugo ibunye anyị foto anyị na-enweghị atụ na Instagram. Maka ya pịa "Share na Instagram". Ugbu a ngwa ahụ jụrụ anyị ma anyị chọrọ ịme mbipụta na akụkọ ma ọ bụ ngalaba akụkọ. N'ụzọ ezi uche dị na ya anyị ga-ahọrọ ebipụta akụkọ ebe anyị nwere ike ịhụ foto panoramic anyị n’enweghị mbelata.
Nke a bụ mbipụta anyị
Emere ya, Ọ bụghị ya super mfe? Ọ bụrụ n ’ị chere na ị ga-enwe ike iwepụta ụdị mbipụta a na Instagram ị ga-achọ nnukwu ihe ọmụma, ma ọ bụ ụdị mmemme ụfọdụ, ị ga-ekwenyela na ọ bụghị. Na-alụbeghị di nbudata Panoragram ma soro usoro ndị a ị pụrụ ịdabere na a mma akwụkwọ.
Panoragram, onyinye dị mma na akaụntụ Instagram gị
Ka i si hụ, inye onyinye dị mma na akaụntụ instagram gị esighi ike. Lee akwụkwọ dịka nke ahụ anyị gosiri gị taa ha na-enye onyoonyo mara ezigbo mma ọ bụrụ na ịchọrọ ka azụmahịa gị pụta ìhè. Ọzọkwa na-emeziwanye ọdịdị nke akaụntụ nkeonwe gị na foto panoramic na-enweghị ọnya na-adọta uche.
Youbudatala ngwa ahụ? Lee, anyị hapụrụ gị njikọ ahụ.
Developer: Ọbọgwụ Dev. SA
Tinye mebere ndabere gị mbugharị video oku
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Etu esi biputere foto panoramic na Instagram
Sonos weputara Arc, igwe egwu di egwu na ihe ndi ozo